Gemstones Market Reopens, Slowly Picking up the Pace | Myanmar Business Today
HomeBusinessGemstones Market Reopens, Slowly Picking up the Pace
Myanmar’s gemstones market, which remained closed for months, is now slowly picking up with some traders reopening their shops.
The traders have prepared to resume the gemstone markets as soon as the government allows them.
“Some shops in Bogyoke Market in Yangon now reopens but receive very few foot traffic. The market has yet to pick up the normal situation,” U Thaung Tun, Secretary of Myanmar Gems and Jewelry Entrepreneurs Association, told Myanmar Business Today.
The jade market also remains closed for five months after Gemstone Expo sold in Myanmar Kyats in Naypyidaw, which coincided with the Covid-19.
The demand in the market is also not high with only lower-priced stones are being traded.
“One in five people who visit the shop buys the jewelry,” he added.
မြန်မာ့ကျောက်မျက်စျေးကွက်သည် COVID ကြောင့် ရပ်တန့်နေရာမှ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ဆိုင်တချို့ ပြန်ဖွင့်ကာ အရောင်းအဝယ် အစပျိုးမှု ရှိလာကြောင်း ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတချို့ ထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံတော်မှ ညွှန်ကြားချက်ရပါက အရောင်းအဝယ်လုပ် ကျောက်ဝိုင်းများပြန်ဖွင့်နိုင်ရန် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် အတွင်းရေးမှူး (၁) ဦးသောင်းထွန်းက Myanmar Business Today ကို ပြောသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်စျေးဆိုလည်း တချို့ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ပြီ။ စည်စည်ကားကား မရှိသေးဘူး။ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့စျေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သလိုတော့အခုမဖြစ်သေးဘူး။ အစလေးတွေတော့ပျိုးပြီး အစမ်းစမ်းပြီးတော့ ဆိုင်ခန်းပြန်ဖွင့်နေကြပြီ” ဟု ဦးသောင်းထွန်းကပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ကျောက်မျက်ပွဲကျင်းပြ ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း တွင်ကိုဗစ်ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်သွားခဲ့ရာ ကျောက်ဝိုင်းများရပ်တန့်ထားခဲ့သည်မှာ ငါးလနီပါးရှိပြီဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ တွင် ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ခန်းတချို့ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိပြီး မန္တလေးတွင်လည်း လက်လုပ်လက်စား တနိုင်တပိုင် အရောင်းအဝယ်တချို့ ရှိနေကာ ငွေကြေးအရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်သူတချို့မှ ကျောက်မျက်ဝယ်ယူ စုဆောင်းမှုများရှိနေကြောင်း ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ ကဆိုသည်။
ငွေကြေးအရင်းအနှီးကြီးသော ကျောက်မျက်ရတနာတချို့အရောင်းအဝယ်နည်းပါးလျက်ရှိကာ အရင်းအနှီးနည်းသော ကျောက်မျက်တချို့ အနည်းငယ်ရောင်းဝယ်မှု ရှိနေကြောင်းကျောက်မျက် စျေးကွက်အတွင်းမှသိရသည်။
“ငါးယောက်ကြည့်မှ တစ်ယောက်လောက်က ကြည့်ရတာအားနာလို့ ဝယ်သွားတဲ့သဘောလောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ လက်ဆောင်လေးပေးချင်လို့ ဝယ်သွားတဲ့သဘော” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ ကျောက်မျက် ရတနာ ပြပွဲများကို ပြည်ထောင်စုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဦးစီး၍ နေပြည်တော်တွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့သော်လည်း ယခု အစိုးရ လက်ထက်တွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မြို့များတွင် ကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလလယ်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက် ရတနာများ ရောင်းရငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၉,၀၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့ ကျောက်မျက် ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
Previous articleThe 2020 US TIP Report Fails Reflect the Country’s Efforts: Myanmar
Next articleMyanmar Consumers Are into Contactless Payment: Visa Survey